Root J-147 Powder (1146963-51-0) Soosaarayaasha - Kiimikada loo yaqaan 'Phcoker'
Budada Raw J-147 waa daawo tijaabo ah oo leh saameyn la soo sheegay oo ka dhan ah cudurka Alzheimer iyo gabowga moodooyinka jiirka ee dardargelinta …… ..
Capacity: 1150kg / bishii
Qalabka Root J-147 (1146963-51-0) video
Macmacaanka Root J-147 (1146963-51-0) Sharaxaad
Budada Raw J-147 waa daroogo tijaabo ah oo leh saameyn la soo sheegay oo ka dhan ah cudurka Alzheimer iyo gabowga moodooyinka jiirka ee dardargelinta da'da. waxay saameyn ku yeelataa dariiqyo badan oo ku lug leh cudur-sidaha cudurka 'neuropathy' ee cudurka macaanka.
Kalluunka Jinka X-147 ku dhowaad diyaar u ah tijaabada caafimaadka ee dadka. Hadda, saynisyahan Salku waxay xallilaan xujada wixii, dhab ahaantii, J147 ayaa. Warqad la daabacay Janaayo 7, 2018, oo ku jirta joornaalka Aging Cell, waxay sheegayaan in daroogadu ay ku xidhan tahay borotiinka laga helo mitochondria, korontada dhalisa tamarta unugyada. Markaa, waxay muujiyeen, waxay ka dhigaysaa unugyada da'da, jiirarka iyo duqsigu waxay u muuqdaan kuwo dhallinyaro badan.
Xashiishka J-147 (1146963-51-0) Smamnuucista
Product Name Dufanka Jinka X-147
Magaca Kiimikada N- (2,4-Dimethylphenyl) -2,2,2-trifluoro-N '- [(E) - (3-methoxyphenyl) methylene] acetohydrazide
Fasalka Daroogada Macluumaad lama heli karo
Molecular Wsideed 350.341 g / mol
milmi Biyaha Solubility: 0.000115 mg / mL
Dufanka Jinka X-147 Application daroogada tijaabada ah oo leh saameyn la soo sheegay oo ka dhan ah cudurka Alzheimers iyo gabowga moodooyinka jiirka ee dardargelinta da'da.
Maxaa J-147 loogu yaqaan daawada ugufiican ee lagu daaweeyo cudurka Alzheimers iyo ladagaalanka gabowga？